Hal sano oo ka soo wareegatay Qaraxii lagu dilay Duqii Muqdisho Eng. Yariisow – HalQaran.com
Hal sano oo ka soo wareegatay Qaraxii lagu dilay Duqii Muqdisho Eng. Yariisow
Muqdisho (Halqaran.com) – Waxaa maanta oo kale 24-kii bishii July ee sanadkii 2019 xilli galab ah ayaa qarax la sheegay in uu ahaa ismiidaamin waxaa uu ka dhex dhacay xarunta Maamulka Gobolka Banaadir, waxaana qaraxaasi ku geeriyooday mas’uuliyiin.
Xilliga uu qaraxa dhacayay ayaa waxaa socday kulan uu shir guddoominayay Guddoomiyihii Gobolka Banaadir ahaana duqa Muqdisho AUN Eng. Cabdiraxmaan Yariisow, waxaana dhaawac culus oo qaraxaasi kasoo gaaray Eng. Yarisoow uu ugu geeriyooday dalka Qatar 1-dii Bishii Agoosto.
Dadka qaraxaasi ku geeriyooday ayaa waxaa kamid ahaa, guddoomiyihii degmada Cabdicasiis Sabaax Cabdullaahi Asad, guddoomiyahii degmada Waaberi, Mahad Cilmi, guddoomiyihii degmada Shangaani, Sahra-zad Sheekh Maxamed, Agaasimihii nadaafadda Cabdifitaax Cumar Xalane, agaasimihii shaqaalaha gobolka Banaadir, Cabdullaahi Dheere, la taliye dhanka sharciga ahaa Xasan Sabriye.
Kadib markii la’aasay mas’uuliyiintii uu kamid ahaa Guddoomiyihii Gobolka Banaadir, waxaa jirtay hadal heyn badan oo ku aadan nooca uu ahaa qaraxa, hayeeshee Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay is qarxisay Haweeney aheyd Agaasimaha Naafada Gobolka Banaadir, balse aysan jirin dad ilaa iyo hadda Maxkamad loo soo taagay qarixii ka dhex dhacay Xarunta Maamulka gobolka Banaadir.
DF Soomaaliya ayaa xilligaas waxaa ay sidoo kale sheegtay inay sameyneyso baaritaan dheeri ah oo ku saabsan qaraxa, hayeeshee ilaa hadda aan la soo bandhigin natiijada kasoo baxday baaritaanka oo u muuqda mid afka uun ku ekaa.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay in maanta ay qabanayaan munaasad lagu xusayo dilka mas’uliyiintii Maamulka Gobolka Banaadir, waxana ka qeybgalaya ururrada bulshada rayidka iyo madaxa kale oo heer gobolka iyo heer dowladeed ah.
Ugu dambeyn, Su’aasha isweydiinta mudan ayaa waxa ay tahay, Sanad kadib Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya Cadaaladda ma horkeeni doontaa haddii ay jiraan dad lagu tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxaas, maadaama ay adag tahay in si fudud qarax lagu geliyo Xarunta Maamulka Gobolka Banaadir.
Tags: Dilkii Eng. Yariisow, duqii hore ee Muqdisho, Hal sano kaddib
Daawo Sawirro: Xaflad sagootin ah oo loo sameeyay madaxdii ka qeybgashay Shirkii Dhusamareb
Somalia to benefit from £18m UK funding to fight locusts